आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ ३१ गते। बिहीबार। - KalaiyaLive.Com.Np
By कलैयालाईभ	 On Jun 14, 2018 77
इश्वी सन् २०१८ जुन १४ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ तछलाथ्व। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष। तिथि– प्रतिपदा, २३:४५ बजेउप्रान्त द्वितीया। नक्षत्र– मृगशिरा, १६:०२ बजेउप्रान्त आर्द्रा। योग– शूल, ७:०९ बजेदेखि गण्ड, २८:१४ बजेउप्रान्त वृद्धि। करण– किंस्तुघ्न, १२:५४ बजेदेखि वव, २३:४५ बजेउप्रान्त वालव। आनन्दादिमा मृत्यु योग। चन्द्रराशि– मिथुन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१० बजे, सूर्यास्त– १८:५९ बजे र दिनमान ३४ घडी ३३ पला। ज्येष्ठमासान्त।
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। कसैले तपाईंको प्रसंशा गर्न सक्छ। आज काममा तपाईंका टीमको सबैभन्दा रिसालु व्यक्ति अचानक बौद्धिक बन्न सक्छ। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
आध्यात्मिक व्यक्तिले आशिष दिन्छ र मनमा शान्ति ल्याउँछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंले आफ्नो प्रतिष्ठामा एउटा नयाँ मणि थपेको कारण तपाईंको उपलब्धिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको हौसला बढाउनेछ। आफुलाई अरूको आदर्श पात्र बनाउन कठिन प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंले कुनै पनि महँगो उद्यमको लागि साइन अप गर्नु अघि आफ्नो निर्णयको प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो योजनामा अन्तिम मिनेटसम्म पनि परिवर्तनहरू हुन सक्छ दिन। तपाईंको जोडी आज धेरै रोमान्टिक देखिन्छन्।
तपाईंको मुस्कान निराशा विरुद्धको समस्या रोक्ने झैं काम गर्नेछ। उचित प्रयोग गरेमा तपाईंको रचनात्मक प्रतिभा अत्यधिक आकर्षक साबित हुनेछ। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। तपाईंले राम्ररी विकास गरेकोले प्रेम जीवनले पनि एउटा मोड लिनेछ। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
यदि सम्भव छ भने लामो यात्रा गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस् किनभने तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर हुनुहुन्छ र यसले तपाईंलाई अझै कमजोर पनि बनाउँछ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। काममा तपाईंका प्रतिद्वन्द्वीले आज आफ्ना नराम्रा कृत्यको परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। आफ्नो साथीको आलस्यले आज धेरै कार्यहरुमा बाधा पर्न सक्छ।
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। घरमा भएको तर्कले घरका सदस्यहरुसँग बेरमाइलो हुन सक्छ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। तपाईं अपेक्षित रूपमा काम नगरेको कारण आफ्ना अधिनस्थहरूसँग एकदम दुखी हुन सक्नुहुन्छ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तपाईंका परिवारले तपाईंबाट धेरै आशा गर्दछन् जसले गर्दा तपाईंलाई रीस उठ्न सक्छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। प्रेम मामिलामा सशक्त नहुनुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो काममा प्रगति देख्न सक्नु हुनेछ। किनमेल र अन्य गतिविधिहरूले तपाईंलाई पूरै दिन व्यस्त राख्नेछ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
पिउने बानीबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि आज धेरै शुभ दिन हो। तपाईंले रक्सी पिउनु स्वास्थ्यको लागि घातक शत्रु हो भनेर बुझ्नु पर्छ र यसले तपाईंको दक्षता पनि घटाउँछ। अनुमान खतरनाक हुनेछ – त्यसैले सबै निवेश धेरै होशियारीसँग गर्नुपर्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंले नगर्ने कुरा अरूलाई जबरजस्ती गराउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमताले राम्रो लाभांश प्राप्त हुनेछ। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
बसेको बेला चोटपटकबाट जोगिन धेरै होशियार हुनुहोस्। त्यसमा पनि राम्रो मुद्राले व्यक्तित्व बढाउँछ र साथै स्वास्थ्य र विश्वासको सुधार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मनोरञ्जन र सुखविलासमा बढी खर्च नगर्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभावलाई घरका संवेदनशील विषयहरूको समाधान गर्न प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। आज एउटा कठिन दिन रहेको छ; तर धैर्य र शान्त भएर हरेक बाधा जित्न सकिन्छ। व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। तपाईंको विवाहले आज साँच्चै कठिन समय अनुभव गर्न सक्छ।
तपाईंले एउटा अप्रिय, लाजमर्दो र निरुत्साहित अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यसले तपाईंको मन मार्नु हुँदैन बरु तपाईंले यसबाट केही सिक्नुपर्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंसँग आज सीमित धैर्य हुनेछ – तर कठोर वा असंतुलित बोलीले तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्। तपाईंले गरेका कार्यबाट कसैलाई फाइदा लिन नदिनुहोस्। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। विवाहित जोडीहरू सँगै बस्छन्, तर यो सधैं रोमान्टिक हुँदैन। त्यसैले आज साँच्चै रोमान्टिक हुन गइरहेको छ।
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। बच्चाहरुले तपाईंका घरको जिम्मेवारी पूरा गर्न तपाईंलाई सहयोग गर्नेछन्। आफ्नो खाली समयमा यस्ता गतिविधिहरु गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। व्यक्तिगत निर्देशनले तपाईंको सम्बन्ध सुधार हुनेछ। आज काममा कसैले तपाईंलाई राम्रो कुरा खान दिन सक्छ। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ
विजय समारोहहरूले पनि तपाईंलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेछ। तपाईंले यस आनन्दलाई साथीहरूसँग आनन्दसँग बिताउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। तपाईंले सधैं विश्वास गरेको कसैलाई तपाईंमाथि धेरै इमानदार छैन भन्ने बुझेर तपाईंले नराम्रो महसुस गर्नु हुनेछ। आज प्रेमको परमानन्दमा तपाईंको सपना र वास्तविकताको मिश्रण हुनेछ। तपाईंको कार्यालयको कामकाजमा केही खतरा हुने सम्भावना छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। असहमतिको श्रृङ्खला धेरै बढ्नेछ र तपाईंको जोडीसित झगडा मिलाउन धेरै गाह्रो हुनेछ।
तपाईंलाई साह्रै तनाउ भएको महसुस भयो भने – बच्चाहरुसँग बढी समय बिताउनुहोस्। तिनीहरूको न्यानो अंकमाल / लुटुपुटु वा निर्दोष मुस्कानले तपाईंलाई आफ्नो दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्छ। दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ। तपाईंको दया र समझलाई पुरस्कृत गरिनेछ। तर कुनै पनि हतार निर्णयले तिनीहरूलाई दबाबमा राख्नेछन, सावधान रहनुहोस्। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। आज काममा तपाईंका टीमको सबैभन्दा रिसालु व्यक्ति अचानक बौद्धिक बन्न सक्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।